Barnaamijka WADDANI - Cabdiraxmaan Cirro - Presidential Candidate- WADDANI-Somaliland
Muwaaddin, Waxaa farxad weyn i-gelinaysa in aan kula wadaago barnaamijkan siyaasiga ah ee uu hoggaanka Xisbiga WADDANI ku tala-jiro in uu fuliyo, kuna hoggaamiyo qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. Wuxu barnamijkani xambaarsan yahay higsi ah sidii aynu innaga oo wadajirna u sugi lahayn qormada aqoonsiga aynu ku leeyahay bahweynta bulshada caalamka, calankeenuna uga babban lahaa xarunta Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa; si ay dadkeennu ugu naalloodaan nabad waarta, sidii ay u dhisan lahaayeen bulsho gaadha barwaaqo iyada oo ku dhaqmeysa habka dimuqraadiyadda wada-tashiga ku dhisan, kuna salaysan dhaqanka Diinteena Islaamka ee suuban.
Xisbiga WADDANI, wuxuu ka dhashay dareen iyo go’aan ah in dib loo culo weelka siyaasadda, lana keeno dhiig cusub iyo maskax firfircoon oo lagu dardar-gelinayo xaqiijinta himilooyinka ummadda Somaliland. Wuxuu albaabo cusub u furayaa da’yarta si ay xooggooda maskax iyo muruqba ugu dhisan lahayeen dalkooda, isaga oo bulsha weynta ku hoggaaminaya hiraal iyo hiigsi midaysan Bari, Badhtamaha iyo Galbeedba.
Barnaamij-Siyaasadeedkan Xisbga WADDANI wuxuu ka dhashay wada-tashi dheer, is-qancin, doodo iyo lafo-gur taxaddar leh, waana mid ku qotoma u-gondo-degga xallinta baahiyaha dhabta ah ee dadka iyo dalka Jamhuuriyadda Somaliland, isla markaana waafaqsan Dastuurka iyo xeerarka dalkaba. Hiraalka iyo hiigisga barnaamijkan waxa udub-dhexaad u ah hirgelinta caddaaaladda ay muwaadiinta Jamhuuriyadda Somaliland u harraadan yihiin, taas oo lagu gaadhayo isbeddelka siyaasadeed ee qotada dheer ee uu xambaarsanyahay barnaamijku. Hogganaka Xisbiga WADDANI Wuxuu higsnayaa in qarankeennu ku dhex-yeesho bulshada caalamka karaamo iyo magac u qalma hanka ummaddiisa iyo dhaxalka ay u reebayaan jiilalkooda soo socda.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro)
Xisbiga WADDANI wuxu:
Hirgelinayaa doonista aan nasashada lahayn ee ay dadka Jamhuuriyadda Somaliland qarannimadooda ugu raadinayaan aqoonsi caalami ah iyo in ay dhistaan bulsho ku dhaqan xornimo iyo caddaalad.
Sugayaa sinnaanshaha buuxa ee muwaaddiniinta Jamhuuriyadda Somaliland, korriinka dheelli-tiran ee gobollada dalka iyo sami-qaybsiga kuraasta iyo khayraadka dalka oo si caddaalad ah loo qaybsado.
Hirgelinayaa ku-dhaqanka qaynuunka iyo xeerarka dalka u yaalla iyada oo la dhawrayo xorriyadaha aasaasiga ah iyo badbaadada dadka
Hoggaminayaa qaran ku ab-tirsada taariikhdiisa hodanka ah ee ka soo xidhiidhsan xaddaaraddii Awdal, boqortooyada Bariga Sanaag, halgankii daraawiishta, halgankii gumeysigii lala galay iyo halgankii dib-u-xoreynta qaran ee SNM.
Si buuxda ugu dhaqmayaa una ilaalinayaa Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, Xeerarka qaranka iyo wada-tashiga dimuqraaddiga ah.
Ku barbaarinayaa taageerayaashiisa tartanka xalaasha ah ee doorashooyinka, nidaamka dimuraadiga wadatashiga ah iyo qaybaha kale ee nolosha bulshada oo dhan.
Ballan-qaadayaa ku-dhaqanka hab-xisaabeedka maaliyadda oo daah-furan iyo isla-xisaabtan joogto ah.
Dhammays tirka mashaariicda qaran ee ahmiyadda leh ee socota, sida waddada Ceerigaabo.
Ilaalinayaa xuquuqda qaybaha bulshada ee dulman ee ay ka midka yihiin beelaha dulman, haweenka, dhallinyarada, iyo naafada; isaga oo dammaanad-qaadaya in ay si buuxda uga qayb-galaan qaab-dhismeedka Xisbiga iyo ka Xukuumadda Xisbiga WADDANI ba.
Hirgelinyaa dhaqanka suubban ee diinta Islamka, akhlaaqiyaadka iyo dhawrsoonaanta shaqo; waxa ka reebban Barnaamijka Siyaasiga ee Xukuumadda WADDANI wax kasta oo ka soo horjeeda diinta islaamka.
Ka soo horjeedaa nooc kasta oo takoor ah oo bulshada Jamhuuriyadda Somaliland u kala qaybinaya qabaa’il, jinsi, gobol iyo nooc kasta oo kale oo kala-qoqob ah.
La dagaallamayaa isku-day kasta oo wax u dhimaya midnimada umadda Jamhuuriyadda Somaliland, dhammaanshaha dhul ahaaneed, nabadda iyo degganaanshahaba.
Higsiga Xisbiga Waddani waa Jamhuuriyadda Somaliland oo ku waarta dal iyo dad midaysan, annaga oo sugnay qormada aanu ku leenahay adduunka, ahna qaran dhistay bulsho ku nool nabad, barwaaqo iyo dimuqraaddiyad.
Wada-jir iyo dhabar-adayg, waxaynu ku gaadhaynaa ictiraaf caalami ah.In ay dadka Jamhuuriyadda Somaliland aayahooda ka tashadaan, waa xaq ay leeyihiin oo aanay cidna u daba fadhiisanayn. Sidaa darteed, waxa higsiganu ku salaysanyahay labada higsi ee kala ah: doonista aan ka daalka lahayn ee ictiraafka caalamka iyo joogtaynta nabadda bulshada Jamhuuriyadda Somaliland.
Wada-jir, waxaynu ku dhalin karnaa dhaqaale ay ku hodanto ummadda Jamhuuriyadda Somaliland.Mudnaanta kowaad waxaanu siin doonnaa shaqo-abuur iyo dakhliga dadka oo kora, waxaannu kobcinaynaa korriinka dhaqaale si aynu shaqo-abuur dheeraad ah uga dhalinno dhinacyada xoolaha, beeraha, kalluumaysiga, faleenka iyo macdantanta. Waxa kale oo iyana aynu shaqooyin cusub ka dhalinaynaa dhinacyada kale ee dhaqaalaha sida: warshadaynta, isgaadhsiinta (ICT), maaliyadda iyo tamarta.
Wada-jir, waxaynu ku dhalan-rogaynaa adeegyada caafimaadka iyo wax-barashada. Mudnaanta kowaad waxaynu siinaynaa sidii saboolnimada loo yarayn lahaa: waxaynu u samaynayn doonnaa ummadda Jamhuuriyadda Somaliland daryeel caafimaad oo tayo leh, kaas oo la awoodi karo; Waxaynu xoojinaynaa dhinaca caafimaadka hooyada iyo guud ahaan haweenka inaga oo ka duulayna, odhaahda, hooyo caafimaad-qabta ayuu ka dhashaa qaran caafimaad-qabaa; waxaynu gaadhsiinaynaa ilma kasta oo Jamhuuriyadda Somaliland ah waxbarasho iyo biyo nadiif ah; waxaanu ku hawl-gelaynaa dib-u-noolaynta iyo ilaalinta degaanka, si dhaxal loogaga tago jiilalka soo socda.
Wada-jir, waxaynu ku gaadhaynaa samaha nololeed ee bulsho, qoys iyo qofba.
Mudnaan gaar ah waxaynu siinaynaa la dagaalanka tahriibta, waxaynu dhallinyarada ku hawl-gelinaynaa dhismaha dalka, iyada oo aynu abuurayno mashaariic ah dhismaha kaabeyaasha waaweyn ee dhaqaalaha, sida waddooyinka, madaarrada, dekedaha, biyo-xidheennada iwm. Waxaynu wax-ka-qabanaynaa dhibaatada guryo-la’aanta. Waxaynu xakamaynaynaa saamaynta aafada “Jiilaalka” iyo abaaraha soo noqnoqda iyo ka haqab-beelka biyaha miyi iyo magaaloba.
Wada-jir, waxaynu ku samaynaynaa isbeddel mug-leh habka dawladdu u shaqayso, innaga oo awoodda uu dadku ku leeyahay kor u qaadayna.
Waxa mudnaanta kowaad leh in aynu xakamayno musuqmaasuqa iyo in laga baxo tamar-darrada wax-qabadka dawladda: waxaynu dhisaynaa dawlad si daahfuran iyo si xil-karnimo leh ugu adeegta dadka. Waxaynu isbeddel tayeyn ah ku samayn doonnaa shaqada dawladda dhexe iyo kuwa hooseba, si dadka aynu ugu adeegno hab dhega-nuglaan, qadarin iyo caddaalad ah.
Wada-jir, waxaynu ku sugaynaa sinnaanshaha buuxa ee muwaaddiniinta Jamhuuriyadda Somaliland,korriinka dheelli-tiran ee gobollada dalka iyo sami-qaybsiga kuraasta iyo khayraadka dalka oo si caddaalad ah loo qaybsado.
Fadlan Faafi oo La wadaag Asxaabtaada. Eng:// Please spread the word :)